Guddoomiyaha isboortiga gobolka Nuugaal oo ka hadlay horumarinta isboortiga gobolka & in isboortigu uu badbaadin karo dhallinta. – Radio Daljir
Garowe, Jan 29 – C/rasaaq Nuur Halac, guddoomiyaha cusub ee isboortiga gobolka Nugaal oo ka hadlay tadawurka uu soo maray isbootiga gobolka Nugaal ayaa sheegay in isaga iyo kooxda cusub ee loo magacaabay hoggaanka isboortiga ee gobolku ay ku ku hawlan yihiin dhismaha aasaaska bidaa’iga ah ee isboortiga gobolka.
Dhismaha iyo qalabaynta xafiisyada isboortiga ee gobolka ayaa uu sheegay in ay ugu horyan samayn doonaan.
Dejinta qorshe lix bille iyo sannadle ah oo lagu eegayo horumarka isboortiga gobolka ayaa sidoo kale uu sheegay in ay ku hawlan yihiin, kaas oo u sahlo doona kooxaha ciyaaraha ee ka jira gobolku in ay ku xisaabtamaan, kalana socdaan jadwalka is-araga ciyaaraha ee gobolka.
Md. Halac waxaa uu xaqiijiyay in ay jiraan carqalahada isboortigu uu la sameyn la?yahay horukaca in ay saldhig taasi u tahay xafiis la?aan iyo maamul xumo dhinaca isboortiga ah oo ka jira gobolka.
Waxaa uu iftiimiyay inuu si weyn u aaminsan yahay in taabagalinta isboortigu uu ka hortag fiican u yahay carqaladaha ragaadiyay dhalinta Soomaaliyeed, sida burcadnimada, tahariibta, iyo mukhaadaraadka.